काठमाडौं । प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको बढुवा गर्दा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले कमिसन माग्ने गरेको आरोप लागेको छ । गृह मन्त्रालयको सचिव रहँदा रेग्मीले आफूसँग पनि कमिसन माग गरेको नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी यादवराज खनालले आरोप लगाएका छन् ।
बुधवार प्रकाशित एक साप्ताहिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा खनालले एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा हुन खोज्दा हालका मुख्य सचिव (तत्कालीन गृहसचिव) रेग्मीसँग तीन पटक भेटेको, हरेक पटकको भेटमा रेग्मीले कुरा चपाएर गर्ने गरेको बताउँदै पछिबाट उनी निकटका व्यक्तिले ‘कता-कता’ मिलाउनु पर्छ, त्यसैले खर्चपर्च चाहिन्छ’ भनेर माग गरेको दावी गरेका हुन् । उनले आफूसँग ४०-५० लाख रुपैयाँ माग गरिएको दावी गर्दै त्यो बुझाउन नसक्दा बढुवा नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालेसमेत आफूसँग कमिसन माग गरेको दावी गरेका छन् । अन्तर्वार्तामा ६ जना डीआईजीको पद रिक्त रहँदा आफू दोस्रो नम्बरको दावेदार रहेकोले स्वतः हुने कुरामा ढुक्क रहेको तर हालका मुख्य सचिव रेग्मी, देउवा र तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई पैसा बुझाउन नसक्दा डीआईजीमा बढुवा हुन नसकेको दावी गरेका छन् । (सर्वाेच्च अदालतबाट उनी डीआइजीमा बढुवा भए पनि उमेर हदको कारण उनले अदालतको फैसला आउनु अघि नै एसएसपीबाट अवकाश पाएका थिए ।)
अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्ः
रमेश खरेलले शुटकेश बोक्नु पर्ने रहेछ भनेका थिए । मैले चाँही सुटकेश होइन,, बोरै चाहिने रहेछ भनेर सामाजिक सन्जालमा लेखेको थिएँ । एक वर्ष डीआईजी हुनु छ, ४०, ५० लाखसम्म मागिएको छ । मैले एक दुई जनासँग कुरा गर्दा पैँसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ आउँथ्यो । तिनको नाम चाँही नखुलाउँ । सचिवज्यूको लेभलबाट पनि माग भयो । मेरो बढुवा नहुनु पर्ने कारण के हो त ? पैँसामा अड्किएको न हो । मैले तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई दुईपटक भेट्दा ‘तपाईको फाइलै बढेर आएको छैन फाइल आओस् राती १२ बजे पनि गरिदिन्छु’ भने ।
गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई तीनपटक भेंटें । सधै चपाएर कुरा गर्ने । आईजीपी (प्रकाश अर्याल)लाई दश पटक भेंटें । नगर्ने कोही नभन्ने । त्यसपछि लेनदेनको कुरा हो ? भनेर सोंधें । सचिवलाई भेट्नुस् भनेर पन्छिने । पछि सचिव निकटका एक जना मान्छे लगाएँ ।
उहाँले कता-कता मिलाउनु पर्छ । त्यसैले खर्चपर्च चाहिन्छ भनेर पठाउनु भएछ । पछि एक जना अफिसरले ‘बुढानीलकण्ठ (शेरवहादुर देउवाको निवास)तिर पनि मिलाउनु पर्छ रे सक्नुहुन्छ भने गर्नुस्, नत्र छोडिदिनु नै बेस हुन्छ’ भने । म डीआईजी बन्न ३ सय पनि खर्च गर्दिन भनेर फेरि श्रीमतीको उपचारको लागि अस्पतालतिरै लागेँ । उनलाई छिन छिनमा केमो दिनु पर्ने । दिल्ली काठमाडाँै सात पटक ओहोर दोहोर गरेँ ।
प्लेन खर्चमा मात्रै एक लाख खर्च भयो ।